China i-LEDD500 / 700 Ceiling LED Double Head Hospital Medical Light enezitifiketi ze-CE Abakhiqizi nabaphakeli | I-Wanyu
I-LEDD500 / 700 Ceiling LED Double Head Hospital Medical Light enezitifiketi ze-CE
I-LEDD500 / 700 ibhekisele ekukhanyeni kwezokwelapha kwe-dome kabili.
Indlu yokukhanyisa yezokwelapha yasesibhedlela yenziwe nge-aluminium alloy enepuleti elijiyile le-aluminium ngaphakathi, okusiza kakhulu ekusakazekeni kokushisa. Isibani isibani se-OSRAM, esiphuzi nokumhlophe. Isikrini sokuthinta se-LCD singalungisa ukukhanya, izinga lokushisa kombala kanye ne-CRI, konke okungashintshwa kumazinga ayishumi. Ingalo ejikelezayo isebenzisa ingalo engasindi ye-aluminium ukubeka kahle. Kunezinketho ezintathu zezingalo zasentwasahlobo, ezifanele amakamelo okusebenza anezabelomali ezihlukile. Ungabuye uthuthukise ukulawulwa kodonga, isistimu yebhethri eyisipele, ikhamera eyakhelwe ngaphakathi kanye nokuqapha.
■ ukuhlinzwa esiswini / okujwayelekile
■ izifo zabesifazane
■ ukuhlinzwa kwenhliziyo / imithambo / kwesifuba
■ traumatology / eziphuthumayo NOMA
■ i-urology / TURP
1. Ukukhanya Okujulile
Ukukhanya kwezokwelapha esibhedlela kunokubola okucishe kube ngama-90% ezansi kwenkambu yokuhlinzwa, ngakho-ke ukukhanya okukhulu kuyadingeka ukuqinisekisa ukukhanya okuqinile. Lokhu kukhanya kwezokwelapha kwesibhedlela esiphindwe kabili kunganikeza ukukhanya okungafika ku-160,000 kuze kufike ekujuleni kokukhanyisa okungu-1400mm.
2. Ukusebenza Kakhulu Kwe-Shadow Free
Ngokuhlukile kwabanye abakhiqizi abathenga amalensi alula, sitshala imali eningi ukuthuthukisa amalensi ayingqayizivele asebenza ngokuncipha. Ama-LED ahlukaniswe ngelensi yawo, dala inkambu yawo yokukhanya. Ukugqagqana kwesibani esihlukile sokukhanya kwenza indawo ekhanyayo ifane kakhulu futhi yehlise kakhulu izinga lesithunzi.
3. Iphaneli yokulawula yesikrini sokuthinta esisebenziseka kalula ye-LCD
Ukushisa kombala, amandla okukhanyisa kanye nenkomba yokunikeza umbala yokukhanya kwezokwelapha esibhedlela kungashintshwa ngokuvumelanayo ngephaneli yokulawula ye-LCD.
4. Ukuhamba Okukhululekile
Ijoyinti le-360 universal livumela ikhanda lesibani sezokwelapha lesibhedlela ukuba lizungeze ngokukhululeka kuzungeze i-eksisi lalo, futhi linikeze inkululeko enkulu yokuhamba kanye nezinketho zokubeka ezingavinjelwe emakamelweni aphansi.
5. Ukunikezwa kwamandla kagesi okwaziwa kakhulu kweBrand
Kunezinhlobo ezimbili zamandla ethu okushintsha amandla, ngaphandle kwalezi ezijwayelekile, ukusebenza okuzinzile ngaphakathi kwebanga le-AC110V-250V. Ezindaweni lapho i-voltage ingazinzile ngokwedlulele, sinikezela ngamandla kagesi wokushintsha amandla amakhulu ngamandla wokulwa nokuphazamiseka.
6. Lungiselela Ukusetshenziswa Kwesikhathi Esizayo
Uma udinga ukuthuthukela ekukhanyeni kwekhamera ngokuzayo, ungasazisa kusenesikhathi, futhi sizokwenza amalungiselelo okushumeka ngaphambi kwesikhathi. Ngokuzayo, udinga isibambo kuphela ngekhamera eyakhelwe ngaphakathi.
7. Ukuzikhethela Okukhethwa Kwezesekeli
Ingafakwa ngekhamera eyakhelwe ngaphakathi nesiqaphi, iphaneli yokulawula ukukhweza odongeni, irimothi nesistimu yokwenza isipele yebhethri.
Langaphambilini I-LEDD620620 Ceiling LED Dual Dome Medical Operating Light ngeWall Control
Olandelayo: I-DL500 Lalogen Lamp Yokuhlinzeka Esususwayo Emasondweni
LEDL500 Zezıhlabane Yamadivayisi LED elishajekayo Ucingo Operat ...
LEDB730 Wall Ukukhweza LED OT Lamp nge Articula ...
LEDB200 LED Wall egibele Uhlobo Medical Examinati ...
LEDD500 Ceiling-egibele LED Single Dome Operati ...
LEDB260 LED Ukusebenza Ukuhlolwa Lamp Wall Typ ...